News Collection: माओवादी किन मुसाझैं चिउचिउ गर्दै बसेको ? : ओली
माओवादी किन मुसाझैं चिउचिउ गर्दै बसेको ? : ओली
जनक केसी, जाजरकोट, मङ्सिर २६- नेकपा एमालेका नेता केपी ओलीले सरकार र संविधान निर्माण दुवैको बाधक एकिकृत नेकपा माओवादी भएको बताएका छन्। उनले माधव नेपालले राजिनामा दिए दुई तीन घण्टामै राजनीतिक निकास निस्कन्छ भन्ने माओवादीले वर्तमान अन्यौल परिस्थितिको निकास दिन नसकेको बताए।
सरकारको राजिनामा मागेर नथाक्ने माओवादी अहिले मुसा जस्तै चिउचिउ गर्दै बसेको छ भन्दै उनले प्रश्‍न गरे- खै नयाँ सरकार बनाउन सकेको ? खै समस्याको निकास निकालेको ?
नेकपा एमाले जाजरकोटको २ दिने प्रथम जिल्ला प्रतिनिधि परिषदको त्रिभुवन उच्च मावि खलङ्गाको प्राङ्गणमा आइतबार उद्‍घाटन गर्दै नेता ओलीले उक्त कुरा व्यक्त गरेका हुन। उनले नेपालको सच्चा कम्युनिष्ट पार्टी भनेको एमाले भएकाले जनताको सुरक्षा र वर्तमान समस्याको समाधानका लागि एमाले आवश्यक परेको बताए। जनता मार्ने, जनता लुट्ने, जनताको सम्पत्ति खोस्ने माओवादी सर्वहाराको पार्टी नभएको उनको भनाइ थियो।
ओलीले अबको केही समयपछि नयाँ सरकार बन्ने बताए। माओवादीले जनता र अन्य दलका कार्यकर्तालाई मार्ने धम्की दिने काम गरेर समाप्तिको बाटो लागेको उनले बताए। जनता अरु दलका कार्यकर्ता मार्ने र अरुलाई आतङ्कित पार्ने जन सेना हुन नसक्ने उनको दाबी थियो।
ओलीले यहाँ जिल्लास्थित सरकारी कर्मचारी र राउटेसँग भेटेका थिए।